Author: Yotaur Shajinn
Hadduu marba qayb la ooyo, Heedhee Sahraay heedhe Badda iyo sulaaqeeda Iyo buurta saysaaban Onkodkiyo sawaxankiisa Salowgiyo jibaadkiisa Danabkiyo salsalihiisa Sarka dhabanka duufaanka Ha ka didin sawaxankooda Duni kuu sakhiran weeye Sayid baad u tahay gabsyada Suubaali oo layli Ku sasabo aqoontaada Senge iyo ka dhigo gabayadaa Sallo iyo ka dhigo oori Gabadh weeye caad saran Badi saayiraadeeda Iyo laab salaaxeeda Guro saadka guudkeeda Iyo sahayda uurkeeda Kordhi noole soorkeeda Iyo baahi saarkeeda Hubi nabad sugnaanteeda Iyo sabo negaanteeda Ha ku deyin xannun saaqa Ha ku badin saqaaf ciiddan Suluf iyo colaad waarta Ha ku saaxin naabaalka Iyo hadrzawi baaruudda Ha ku didin sabbeeyaanka Sabareynka boodbooda Iyo sukhula naareedka Ha la dhicin sawaariikhda Iyo saanadaa miiggan Ha sumayn macaankeeda.
Sakaraad ma lool baa? Ijaabo ka baadi-doono, Ujeeddo ka keeni maysid!!! Waxaan ugu hamranayaa Hooyaa ka dhalatoo Naaskii habreed baa Iga hiilinaayee Wallee hawlahaan galo Iyo heegantaan dhigo Dumar lama haweysteen Ragba ma hungureeyeen Hanti lagama dhiibeen Guri laguma hoysteen Hadal lalama yeesheen!
Haddaad na ilaalin weydo, Shidaad naga oollin maysid, Agtaydana jiifi maysid, Haddaan lays maqmaqashiin Midho hore u caan baxay Qorigiyo masaartana Madfac loogu jilib dhigin Maahmaahna lagu darin Maya,Maya-na lagu odhan Ninka cunay magtaadii Maandeeq la soo dhicin, Anuun baa mataanaha Mooyaha u tumayee Madiixayga luuqdiyo Masafada gadooddiyo Malahaygu waa been, Sidaan moodayaan jirin.
Allow yaa wax suureeya Salka dunida yaa dhawra Iyo seeska jiriddeeda Wacanaa sansaankeedu Badanaa sudaaddeedu Saxanaa hannaankeedu Allow yaan sugnaanteeda Saymiyo u rogin duullan Subax noolba dhiig daata Xadhig iyo silsilad shiilan Allow yaan sinnaanteeda Ku beddelin saraar oodan Iyo seere wiil qaytey Dadka saran guudkeeda Yaan ka dhigin sabool qaawan Iyo soobir caydh jooga Erey sami wuxuu gooyo Allow yaan ku jarin soodhka Garashada ka dhigan seefo.
Saxaafaddu way xigan kartaa, laakiin isha xigashada waa in la muujiyaa.
TOP Related Posts PRINCIPLES OF COMMUNICATION ENGINEERING BY ANOKH SINGH PDF
Balse waxa la yaab dhalay Nin barwaaqo haystoo Ka engegan badhaadhee Bishmahaagu Caarrow Maxay kuu basaaseen Ma buskaad is-marisaa? Wuxuu taa ku daray Tahar aan liq idhi baa Igu turunturrootoo Waxay taagan tahay meel Taladeedu dhimatee Tolow yaa farreeya ah Wuxuu taa ku sii daray Wakhtigii tin laga goo Wax tashiilo igu yidhi Anna taawintaydii Idhi hay tafaafulin Isagayga toosnaa!
Addinkaaga hoos taal Aburkiyo xarraankiyo Orka iyo mashxaraddiyo Alalaaska baxayaa Ma ujeeddadaasaa? Wixii roob ku di’I jirey Wuxuu doog jilbaha dhigay Diihaal ma laqanyoon Dibnahaa qallalan weli Duqu wuxu ka marag kacay Danni horeba loo qabey In dorraad gumaystuhu Dusha sare ka raran jirey Duqu waxaanu garanayn Kol haddii dabuubtaas Dibnihiisa laga helay Denbi kale inay tahay Isagoo galgalad kale La hadlaaya gabadhii Dadka guud ahaantii Wuxu yidhi guddoonshuhu: Areerinka meydka daawo, Hubkooda gabayxda dheer Hadduu sida awr xunbeeyo, Intii ay dhul weynaha Raggii dhoofay haysteen Sida awr dhufaanaa Usha laygu dhaqayoo Labadayda dhaban baan mid markay dhirbaaxaan ka labaad u dhigayoo intaas waan dhursugayee inta dhiisha qabada ah wuxuun iigu dhacayaan idinna maa I dhawrtaan?
Maxaad saymo gadataa dab gamaaray hurisaa Maxaad gawsahaagiyo miciyada golxaystiyo ciddi wada garaara ah shaadh u gelisaa maxaad geda-gedaysaa hadba geed is-marisaa Ummad geylameysoo gaarkooda taladii inta ay gorfeeyeen raba inay geyoodaan kuwa jira gadaashana gaadiid u celiyaan intaan gaasha-weyntiyo cawa-darantu soo gelin maxaa geeddigoodii gujis lama filaaniyo gal dad-liqa ku noqoteen? Waayeel godoodoo Gacalkii ku duuloo Guluf weerar saaroo Gamcihii dhiigii Gororshoo ku maydhoo Ma hadhooyin geystoo Misna loo garaaboo Godob reeb la siiyoo Inan loo guddoonshoo Gudbiyoo is dhaafshoo Gocor aan xil hanan iyo Nin labaad u guurshoo Ka gabbaati qaatoo Yidhi gaari maahayn Waa xaal gurracanoo Gurranoo la habayada Waxaan uga gol leeyahay Ruuxii gartow sheeg.
Gudub magacu waa hore Galbay oo la wada maqal Dunidoo dhan wada gaadh Gabdhihiina loo sheeg Iyadaan god loo deyn Gaabayada I saareen Geestee u duubaa? Hadraawi wuxuu ku lid yahay oo ka soo horjeedaa dadka-dadka dulmiya, booba,dhaca, yasa,xaqira, dadka is waaweyneeya, dhaqankooda tuura, muslimnimadooda ka taga.
TOP Related Posts FATAWA RAZAWIYA EPUB DOWNLOAD
Cadceedda ifaysa daawo, Ragoow ololaynta Jaadka, Alla magane sheekadu Si kastaba u murugtoo Muggeed dhaaftay xaajadu. Rabiyow dagaaliyo dabley gaatamaysiyo doofaarro badan baa musduleedka joogee hadraawii diidey nabadiyo belo laga ducaystiyo manaxaan hanoo dagin duulaan hanagu jebin. Hadduu dhaashto jiilaal Ama dhiibsho laamaha Naxariis la kala dhaco Dhardharraanta quruxdiyo Dhaaddanaanta liqanyada Si kaluu u dheegtaa.
Ku daalka abaabulkeeda, Indhahaagu kululaa Eebadaadu toganaa Warmahaagu adakaa Hadrqawi ku haysiyo Aanadaadu weynaa Yaad ka aarsanaysaa Ma nin aabbahaa diley?
Waxaan daanka soo marin Dalqadaaba celisee Wax dareenku iga jiro Ninka ii dardarayow Taas dameero loo sheeg Dirxi iima dhuuntee Midho daray nin jecelow Ku liq adigu duuduub Ninka dayday kaga dhacay Dad intuu u xilan jirey Noloshiisu duug ma leh Bad daruuran baan ahay Laygama dabbaashee Ninka doonidaydii Kala degey halkiisow Anba doonnidaadii Kala degey hankaygii Damdamtiyo shirqoollada Dirashada dhufaannada Shaxda dalagta lawlaban Waa hadraawwi dagayaa Xadhig qoob la duulaa marba lay debcinayaa nin I deydeyaayow dhuka qaar gabayzda iga deyin nin dorraad ogsoonaa halkii Daado lala maray jidh dubaaxi maayee nin gar iigu dudayow dermno haygu kala bixin duhur lays hor-joogaa la’I deedafeeyoo duqaydiyo ahdraawi garadkii dhulka ugu da’weyneyd dunbukh baan u dhiiboo meyd bay dul yaallee miyaan geedka damalka dooyaysan karayaa.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Maqal In salaadu weligeed kala tahay sunniyo faral u ogow saxiyo maan. Haddeer ku abaysan maayo; Subax dhalatay caadkeeda Ha ka bogan wax saarkeeda Adiguba samee maanta Berritona sargoo heedhe Noloshaba inaad saafto Qaabayso saabkeeda Waxaan suura gelin maaha.
Dhibaatada xilkeedii horaa ugu dhabcaasheene Maantana sidii dhagax dixeed hawgu sii dhegin Inta shay la dhawrtiyo haddaan diinta kugu dhaarsho Haddaan dhaar carriyo caaggan iyo dhaar cas kugu dhaarsho Inta gabay dhaf leeyahay haddaan kaaga dhira fuulo Haddaan dhaho haddaan dhigo haddaan weli dhiib-dhiibo Anigoon wax kuu dhimin haddaan dhegaha kuu buuxsho Dhaq-dhaqaaqa ma kaa iman karaa dhiillo lagu baajiyo.
Ka rog oo haddana saar Saanteena guudkiyo Suntu hilibka dhaaftoo Sal waxay ku leedahay Saableyda uurkiyo Sambabada dhexdoodoo Maal baa la sarayaa Selel looma baahnee Kii seedayow toos. Maxaan geystay oo dhimay?